Chicago, IL • Fanorana amin'ny vatana sy ny fanorana NuRu
Aza mankaleo sy reraky ny any Chicago. Fandriho ny otra nuru anao ara-nofo.
I Chicago, tanànan'ny Chicago amin'ny fomba ofisialy, no tanàna be mponina indrindra ao amin'ny fanjakan'ny Etazonia any Illinois, ary ny tanàna fahatelo misy mponina indrindra any Etazonia. Miaraka amin'ny tombatomban'ny mponina 2,705,994 (2018), izy ihany koa no tanàna be mponina indrindra any Midwestern Etazonia. Aza mankaleo sy reraky ny any Chicago. Mamandrika ny fanorana nuru ara-nofo.
Jereo daholo (35)
Tovovavy aziatika mahafinaritra
Slide amin'ny vatana mampihetsi-po